उपप्रधानमन्त्री सहित बामदेवको नेतृत्वमा माधब नेपालको पार्टी देउवा सरकारमा जाँदै ! – GALAXY
उपप्रधानमन्त्री सहित बामदेवको नेतृत्वमा माधब नेपालको पार्टी देउवा सरकारमा जाँदै !
काठमाडौं। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने तयारी अवस्थामा छ । निर्वाचन आयोगले विभाजित पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको सनाखत गरेलगत्तै सरकारमा जाने भएको हो ।आउँदो हप्ता नेकपा एस सरकारमा जाने निश्चितप्रायः भएको हो ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार बामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा एस सरकारमा जाने भएको छ । गौतमले उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउने चर्चा छ । उनले गृहको जिम्मवारी मागेपनि देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँणकै लागि उक्त मन्त्रालय राख्ने भएका छन् ।
नेकपा एस बाट प्रेमबहादुर आलेले पर्यटन, किसान श्रेष्ठले उद्योग मन्त्रालय पाउने निश्चितप्रायः भएको छ । मेटमणि चौधरी र रामकुमारी झाँक्री पनि मन्त्री बन्ने सुचीमा छन् । उपत्यकाबाट निर्वाचितमध्ये जीवनराम श्रेष्ठ र कृष्णलाल महर्जन मन्त्री बन्ने सम्भावित छन् । जीवनराम ओलम्पिक कमिटीमा रहेकाले कृष्णलाललाई मन्त्री बन्ने अवसर मिल्न सक्छ ।
यसपटक विरोध खतिवडाले पनि मन्त्री बन्ने मौका पाउने बुझिएको छ । उनको पत्नी मुनु खतिवडा प्रदेशसभा सांसद छिन् । उनी पनि माधव नेपाल समूहमा आएकी छिन् ।
नेकपा एसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ७ वटा सम्म मन्त्रालय पाउने बुझिएको छ । देउवा नेपालको साथ पाएर निकै खुशी हुनुले मागेको ७ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भएको बुझिएको छ ।